Izilwanyana zihlala zidlala indima ebalulekileyo ebomini babantu. Babala malunga nezigidi ezi-2 zezilwanyana, ininzi zazo, eziyi-2/3, ziyizinambuzane. Ukususela kumaxesha amandulo umntu wazondla izilwanyana, usebenzisa kwiindawo ezininzi zomsebenzi kunye nobugcisa.
Izilwanyana zasekhaya zasekhaya zinye. Kungekudala, izazinzulu zithandana ngokunyaniseka ekuqinisekiseni ukuba kukho inzuzo yezilwanyana ezifuywayo kubantu. Akumangalisi, umzekelo, kwiGrisi naseYiputa, iikati kunye neenja zaziphatha izifo ezininzi, kwaye uHippocrates waqaphela ukusebenzisa ihashe. Kuye kwangqina ukuba isinxibelelwano nezilwanyana zasemakhaya sinempembelelo empilweni: uxinzelelo lwegazi luyancipha, ukuxhalabisa, ukuxinezeleka kuya kususwa. Unceda ukukhulula ngendlela yokuziphatha nokuvakalelwa. Abanikazi bamadoda bafumana uxinzelelo lwegazi oluqhelekileyo kunye ne-pulse eqinile.
Ukongezelela, abantu abaphethe izilwanyana bazincitshiswa kwiimeko ezahlukeneyo kunye nezinye izifo baze babuyisele amandla abo ngokukhawuleza. Ngoko kuvela ukuba izilwanyana azikho nje abahlobo bokwenene, kodwa "nesixhobo" sokuphucula impilo. Ukusetyenziswa kwezilwanyana eziphathekayo kubantu kubangenisa kunye nokuthetha okulula kunye nezilwanyana, kubangele imvakalelo emnandi.
Sekude kwaziwa ukuba iikati, ngokomzekelo, zineengxaki ezibuhlungu kakhulu kwaye zihlala zilala phantsi, kunjengekuthabatha onke amandla amandla avela kwiindawo ezibuhlungu. Ukugqwesa ukuhlangabezana neengxaki kunye neemeko ezixinzelelekileyo. Kwaye kufuneka uthabathe ikati ezandleni zakho, emva komsebenzi womsebenzi onzima kunye ne-pat, njengokukhathala kwaye akukho mkhondo.
Izinja nazo zidumileyo njengabagulayo. Ngokukodwa, oku kusebenza kwizinwele zeenja, apho iimveliso zifumene ubuhlungu obuhlungu kunye nokulondoloza kwi-radiculitis. Ukongezelela, abanini bezinja banikezwa umsebenzi omncinci wemizimba yonke imihla.
Kodwa ukufumana iintlanzi nokubukela kuyonwabile. Okokuqala, ichibi lokufakelwa likhupha umoya kwindawo; Okwesibini, ukubonwa kwentlanzi ehambayo kunciphisa uxinzelelo, kuthoba inkqubo yeentlanzi kwaye kunceda ukunqanda ukulala. EMpuma kukho inkolelo: ukuba intlanzi yafela e-aquarium, ithetha ukuba ithatha inhlekelele eyayijoliswe kumnikazi we-aquarium, ngaloo ndlela ikhusela ngokuhlawula ngobomi bakhe. Yaye ngokutsho kweenkosi zaseMpuma, iFeng Shui, ukuba i-fishfish ivelisa uvuyo kunye nezinye iimvakalelo ezintle.
Abantwana nabo bahlale bengalindelanga izilwanyana. Emva koko, ubuhlobo babantwana kunye nezilwanyana zizisa ixesha elihle, iimvakalelo ezintle, uvakalelo oluhle kwaye ngaphezu koko abantwana bafumana izakhono zonxibelelwano. Abaninzi bafunda, umzekelo, iinkalo ezinje ngokubhekiselele kwixanduva, ukunakekelwa ngabathandekayo kunye nabahlobo.
Iintlawulo zezilwanyana ezifuywayo zandisa abantu abadala. Bamele baphume ngokuphindaphindiweyo ekhaya ukuze bathenge ukutya kwezilwanyana zabo okanye bathathe ukuhamba. Yikuphi okulungileyo kakhulu kwimpilo. Ukususela kumsebenzi omncinci okwangoku kule mfuneko kuyimfuneko ukuba uhlale unesimo esifanelekileyo kunye nemeko yezempilo. Abahlobo abane abaneenyawo banceda ngokugqithiseleyo ukuphelisa uxinzelelo kunye nobutyebi. Kwaye ngaphandle kwesi sigqibo esiphezulu sabantu abadala abasweleyo behla baya kunakekela, banakekele isilwanyana sakho kunye nomvo wokuxanduva lwabo. Kwaye nantsi into ebangel 'umdla. Kuphakathi kwetitshala kunye nesilwanyana unxibelelwano oluthile lwenziwe. Ngoncedo lwabo, izifo ezininzi zinokuthintelwa. Ukunciphisa ubunzima besifo se-cardiovascular, izinga le-cholesterol egazini.
Ngokuqhelekileyo abantu abagcina izilwanyana endlwini bathi bafumana uthando olungakumbi kwizilwanyana zabo ezifuywayo kunabantu. Kubonakala ngathi ukunyaniseka, kodwa kudla njalo. Izilwanyana zenza ubomi bethu bubonakale, bulibaleke kwaye buyongeze. Ziba negalelo elikhulu kuphela kwimpilo, kodwa nakubomi bonke bomntu ngokubanzi. Imidlalo enezilwanyana ezifuywayo zifudumala kakuhle, zombini umnini kunye nesilwanyana. Ngenxa yokuba zizisa inzuzo enkulu kumzimba nomoya.
Uncedo olubalulekileyo kubantu luzisa imfuyo neenkukhu, ezinika ukutya kunye noboya okanye ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo yomsebenzi. Zingaphi iindidi zezilwanyana ezifuywayo zikhona - iindidi ezininzi.
Ngokuqinisekileyo, nayiphina isilwanyana sinokuchaphazela kakhulu kwimpilo yomnini wayo. Susa ukhathala, ukudandatheka, ujabule - uluhlu olungaphelelanga lwabazalwana bethu abancinci abangakwenza. Ukunyamekela izilwanyana, ukuzithengisa kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuxhaphaza kuncitshiswa kwindlela ethile yokwelashwa kwengqondo. Ngokuqhelekileyo kufuneka uqhagamshelane nabahlobo abane abaneemilenze, ngcono ukuba izilwanyana zive. Iintsapho ezininzi apho zikhona izilwanyana, qaphela ukuba imeko iyakulungeleka. Kwaye oku kufuneka simbonge kakhulu kwizilwanyana zethu ezifuywayo!
Izinja zohlobo lweBullmastiff
Ukunyamekela nokugcinwa kwemvundla
Urolithiasis yezinja kunye neekati
Izifo ezivuthayo zezidalwa zesono
Abaxhasi - i-accessory trend in wardrobe ye-2014
Ijeketi ephantsi - umzuzu-ongabikho-2016
Izinzuzo kunye nokungalunganga kwinqatyana yokulahleka kwesisindo: into engcono?
Izakhiwo ezisetyenziswayo kunye nokusetyenziswa kweenjongo zonyango lweetchi
Unyaka omtsha Inkukhu enemihla